Africa " Journey-Assist - Fitsangatsanganana any Afrika. Firenena afrikanina
Kaontinanta tsy mahazatra sy mahavariana Africa manafina zava-miafina maro izy ireo, ka tsy hambara afa-tsy ny ampahany amin'izy ireo amin'ireo mpikaroka very fanantenana indrindra. Ny tany mafana, ny savana tsy misy fetra, ny faritry ny natiora sy tsy misy fady, ny razana avy amin'ny razana.
Ny an'ity faritr'izao tontolo izao ity, araka ny dikan-teny mahazatra indrindra, dia avy amin'ny anaran'ny foko "Afri", izay nipetraka taloha tany Afrika Avaratra. "Africa terra"-" tany afrika ", araka ny niantsoan'ny Romana ny kaontinanta. I Afrika dia mahatratra 30,4 tapitrisa metatra toradroa ny velarany. km. Ny kaontinanta tokana izay misy afovoany indrindra mifandraika amin'ny rafitra fandrindrana an'izao tontolo izao: i Afrika dia nita ny meridian voalohany sy ny ekoatera. Sasaina any avaratra amin'ny Ranomasina Mediteraneana, any atsinanana ny Ranomasina Mena sy ny Ranomasimbe Indianina, any andrefana ny Oseana Atlantika. Afrika dia mifandray amin'i Eurasia amin'ny alàlan'ny Isthmus of Suez, izay amakiana ilay fantsona mitovy anarana aminy. Eo amoron'ny morontsiraka, izay mihoatra ny 30 km ny halavany, dia misy haran-dranomasina matetika, manan-karena zavamaniry sy karazam-biby maro karazana.
Afrika no kaontinanta mahamay. Ity ny efitra lehibe indrindra eto an-tany - ny Sahara. Ny foko foko indrindra eto an-tany dia any Afrika. Manisa foko 500 ka hatramin'ny 8500 izy ireo ary mampiasa fiteny 1,5-2 eo ho eo. Ny fiteny arabo mahazatra sy ireo fiteniny. Betsaka ny foko tia ny fiteniny. Na izany aza, noho ny fitarihan'ny tantara, ny kolontsain'ny firenena, ny fahasamihafana ara-poko, ny ampahany lehibe amin'ny Afrikanina dia miteny fiteny roa na maromaro. Mahatratra 1200 tapitrisa ny mponina any Afrika ary tsy mitsaha-mitombo. Ny ankamaroan'ny mponina dia mitaky ny finoana silamo.
Misy 62 ny fanjakana any Afrika, ka ny 54 amin'ireo dia tsy miankina. Any amin'ny firenena sasany, dia mbola misy ny fanandevozana. Ny firenena rehetra afa-tsy i Afrika Atsimo dia mivoatra, ny ankamaroany dia mahantra indrindra eto an-tany (ny 70% -n'ny mponina dia ambanin'ny faran'ny fahantrana). Ny tanàna be mponina indrindra ao amin'ny kaontinanta dia renivohitr'i Ejipta, Kairo, izay misy mponina 17 tapitrisa. Mety ho gaga sy mistery, maoderina ary mihemotra, manankarena sy mahantra i Afrika, misokatra sy mampidi-doza amin'ny ambolon'ny habibiana, fa tsy hamela olona tsy hiraharaha, manintona ny sain'ny mpankafy sy mpitsangatsangana maneran-tany.
I Afrika irery no kaontinanta miorina afovoany indrindra amin'ny resaka rafitra mandrindra izao tontolo izao: izy io dia niampita ny meridian voalohany sy ny ekoatera. Sasaina any avaratra amin'ny Ranomasina Mediteraneana, any atsinanana ny Ranomasina Mena sy ny Ranomasimbe Indianina, any andrefana ny Oseana Atlantika. Afrika dia mifandray amin'i Eurasia amin'ny alàlan'ny Isthmus of Suez, izay amakiana ilay fantsona mitovy anarana aminy. Eo amoron'ny morontsiraka, izay mihoatra ny 30 km ny halavany, dia misy haran-dranomasina matetika, manan-karena zavamaniry sy karazam-biby maro karazana.
Avaratra - Cape Blanco (Ben Secka, Ras Engela, El Abyad) 37 ° 20′28 ″ s. W. 9 ° 44′48 ″ c. e.
Atsimo - Cape Igolny (Agulias) 34 ° 49′43 ″ s. W. 20 ° 00′09 ″ c. e.
Western - Cape Almadi 14 ° 44′27 ″ s. W. 17 ° 31′48 ″ s e.
Atsinanana - Cape Ras Hafun 10 ° 27′00 ″ s. W. 51 ° 24′00 ″ e.
Ny faritra ara-batana ara-batana dia manavaka: Africa avaratra (Tendrombohitra Atlas, Sahara), Afrika Andrefana (tapany andrefan'ny faritra Sudan-Sahel, Guinea Avaratra), Central Africa (faritra atsinanana amin'ny faritany Sudan-Sahel, Congo Basin), Afrikana atsinanana (Tany Etiopiana, Plateau Afrika Atsinanana, Saikinosin'i Somalia) ary Afrika Atsimo (miaraka amin'ny nosy Madagasikara).
tany efitra Sahara mandrakotra ny ampahatelon'ny kaontinanta Afrikanina manontolo ary izy no efitra lehibe indrindra eto an-tany izay misy faritra 9 tapitrisa metatra toradroa. km. Ny tany efitra dia ahitana faritra lemaka vita amin'ny vatolampy, tohodrano mihetsiketsika ary ranomasina be dia be. Ny reniranon'i Nile sy Congo no tena ilaina amin'ny fiainana ain'ny olombelona amin'ny toetrandro mafana any Afrika. Ireo loharanom-pahefana mandeha herinaratra, loharanon-jono, tambajotra fitaterana be dia be.
Misy riandrano mahafinaritra any Afrika Victoria (120 m avo) ary Tugela (ny haavon'ny haavon'ny cascade 933 m), volkano Kilimanjaro (5895 m) - ny faritra avo indrindra any amin'ny tanibe, ny lohasaha miadana Afrikana Atsinanana - ny harenan'ny zanak'olombelona ary iray amin'ireo fahagagana mahatalanjona indrindra, izay tadiavin'ny kaontinanta ara-bakiteny.
Manankarena amin'ny fametrahana diamondra, volamena ary menaka i Afrika. Ny antsasaky ny fitrandrahana volamena sy diamondra maneran-tany dia mianjera amin'ity kaontinanta ity.
Tontolo moka Ny ala any Afrika dia asian'ny ala maitso malemy, ala mifangaro, savana ary ala. Any an-tany lemaka, ny ahitra tsy fahita firy, ny hazo tsirairay, ny ala maniry, ary ny sisin-tanin'ny kontinanta dia namboarina tamin'ny sisin'ny maintso sy kirihitra.
Ety amin'ity tontolo ity dia misy karazam-biby be dia be. Ao amin'ny savilia dia maheno trompetra ny fidradradradran'ny elefanta sy ny fieron'ny liona tratra ilay tratra. Ao anatin'ny halalin'ny ala be dia be no fianakaviana gorila. Ao amin'ny renirano dia misy voay miolakolaka. Ny kaontinanta afrikana dia nanolotra an'izao tontolo izao ny biby avo indrindra - giraffe ary biby lehibe indrindra tany - elefanta. Ny biby masiaka indrindra sy mampidi-doza ao Afrika dia ny hippopotamus.
Ankoatra ny vorona dia andiany 22 izay miaina any amin'ny tanibe, vorona maro be avy any Eoropa и Asia.
Mendrika ny hisaina manokana ny natiora Madagasikara, izay matetika no ampifandraisina amin'ny faritra Afrika Atsimo. Sahabo ho 80% ny karazan-javamaniry sy biby rehetra eto Madagasikara no misy aretin-koditra. Ary ny 90% -n'ny zavamaniry eto amin'ity nosy ity dia tsy hita any an-kafa.
Ny foko foko indrindra eto an-tany dia any Afrika. Manisa foko 500 ka hatramin'ny 8500 izy ireo ary mampiasa fiteny 1,5-2 eo ho eo. Ny fiteny arabo mahazatra sy ireo fiteniny. Betsaka ny foko tia ny fiteniny. Na izany aza, noho ny fitarihan'ny tantara, ny kolontsain'ny firenena, ny fahasamihafana ara-poko, ny ampahany lehibe amin'ny Afrikanina dia miteny fiteny roa na maromaro.
Ny mponina ao Afrika no manana fiakarana lehibe indrindra eto an-tany.
Misy fanjakana 62 any Afrika, 54 ny iray tsy miankina. Amin'ny firenena sasany (Maoritania, Niger, nanana, Somalia, Nizeria, Tchad, Sodàna) mbola misy ny fanandevozana na endrika fiankinan-doha manokana. Ny firenena rehetra, ankoatran'i Afrika atsimo, dia mivoatra, ny ankamaroan'izy ireo no mahantra indrindra manerantany (70% amin'ny mponina miaina ambanin'ny fari-pahantrana).
Ny tsangambato any Afrika dia maneho ny tontolo taloha, izay voatahiry eto ary saika mifangaro tanteraka.
Tempoliny sy piramida ejipsianina tranainy, ilay Sphinx lehibe, fasan'i Tutankhamun, piramida mihoatra ny 200 any Sudan, Luxor, Karnak, Carthage, taloha Tonizia, Alexandria dia ampahany kely amin'ny lovan'ny fahiny.
Ny tsangambato miteraka fahagagana any amin'ny kaontinanta afrikanina dia ahitana: ny masinina eo an-tendrombohitra Mount Sinai, ny riandrano, ny Color Canyon, ny tahirin-javaboary sy ny valan-javaboary, ny Tendrombohitra Atlas mahafinaritra, ny kianja mena. Maraoka, faritra mahafinaritra amin'ny tany efitra Sahara.
Fiainana ara-tsosialy sy politika
Matetika ny firenena afrikanina dia mivoatra eo ambanin'ny fitarihan'ny herin'izao tontolo izao, izay manome ny fanjakana ny kaontinanta afrikanina ho loha laharana amin'ny politikany.
Manintona ny saina ny firenena mandroso izay mitady hanamafy ny herim-po entin'izy ireo ny coups d'état, ady an-tafika, olana momba ny faritany, fitsidihana, fitokonana, fampihorohoroana ary ady an-trano any Afrika.
Na dia lavitra ny harena voajanahary atsy Afrika dia betsaka ny firenena Afrikanina mijaly noho ny hanoanana, ny ady an-trano ary ny areti-mifindra. Ny firenena sasany, toa an'i Ejipta sy Afrika atsimo dia mivoatra mahomby, fa ny ankamaroan'ny firenena Afrikanina kosa mijanona ao ambanin'ny tontolon'ny fahantrana. Ny sasany aza dia firenena tsy fantatra akory.
Ny fitrandrahana sy ny fambolena dia ivoho ny ankamaroan'ny toekarena Afrikana.